तिम्रा जेलखानहरु थप निर्माण गर, यहाँ अपराधीहरुको संख्या करोडौं पुग्ने निश्चित छ — Imandarmedia.com
तिम्रा जेलखानहरु थप निर्माण गर, यहाँ अपराधीहरुको संख्या करोडौं पुग्ने निश्चित छ
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अर्ध बाम सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि चरम धरपकडमा उत्रिएको छ । चुनावको मिति नजिकिएसंगै सरकारले नेकपामाथि निस्तेज लगाएको छ ।
बजार होस् गाउँघर नेता कार्यकर्ता मात्रै हैन विप्लवको नामसँग परिचित र नेकपाका सामान्य शुभचिन्तक समर्थकहरुलाई समेत पक्राउ गर्ने देउवाले आदेश दिएका छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको अर्ध बाम सरकार छ । उसो त सरकारको यो कुनै नौलो धरपकड गर्ने तरिका भने होइन, किनकी यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि नेकपामाथि चरम दमन गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचनताका नेकपाका सयौं नेता-कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई पक्राउ गरेर प्रचण्ड सरकारले हिरासतमा राखेको थियो । त्यति मात्र होइन ‘तिमीहरुका केन्द्रीय नेताहरु कहाँ बस्छन ? के गर्छन ? के खान्छन ? युद्ध हुन्छ की हुदैन ? भन्दै उनीहरुलाई यातना समेत दिएको कुरा हिरासतबाट छुटेकाहरुले बताएका थिए ।
परम्परागत संसदीय राजनीतिक प्रणालीकै बिरुद्ध खरो उत्रिएको नेकपा अहिले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेलगाएतका दलहरुका लागि गम्भीर चुनौती बनेर खडा भएको छ ।
भ्रष्ट्राचारी, दलाल, कमिसनखोर, दादागिरी गर्ने र बिभिन्न बहानामा देशको ढुकुटी रित्याउनेहरु यतिबेला नेकपाको नजरमा परेका छन् । ती कुनै व्यवसायी, पेशाकर्मी र भ्रष्ट राजनीतिकर्मी, राजनीतिक दलाल तथा कमिसनखोरहरु नै हुन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नाम सुन्दै यिनीहरुको रगत सल्बलाउन थाल्छ । उनका नेता कार्यकर्ताको सुराकी गँरु गँरु लाग्छ । र अन्त्यमा सत्ता र पैसाको शक्तिमा उनीहरु प्रहरी परिचालन गर्छन र उनीहरुको घटिया हर्कतबिरुद्ध धावा बोलेको आपरधामा जाख्छन् जेलमा । के २-४ जना नेता कार्यकर्ताहरु जेल जादैनमा नेकपाको क्रान्ति रोकिन्छ ?
के केहि २-४ सय क्कार्यकर्ताहरुलाई हिरासतमा राख्दैमा एकीकृत जनक्रान्तिको यात्रा बीचबाटै भत्किन्छ ? अहँ कदापी होइन । म खबरदारी गर्न चाहन्छु, यो देश, यो समाज, यो व्यवस्था र यो सत्ता परिवर्तनका खातिर समरयात्रामा निस्केका योद्धाहरु कदापी हार्दैनन् भनु या हार्न नै जाँदैनन् । भौतिक रुपमा मरे पनि उनीहरुका सपनाहरु कहिले मर्दैनन । त्यहि सपना बोकेर अर्को योद्धाले अर्को अठोट गर्छ – ‘म मारेर पनि यो सपना पुरा गर्छु, यो देश, समाज, व्यवस्था र यो सत्ता परिवर्तन गर्छु ।’
हो त्यसैले तिमि शासकहरुलाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु आज । म पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको समर्थक हो । शुभचिन्तक हो । आउ यहि अपराधमा मलाई पनि गिरफ्तार गर र लगेर जाख त्यो तिमीहरुको यमलोक (कारागार) मा । सक्छौ ? तर याद राख तिमीहरुको पराजय एक दिन आउछ नै, सुनिश्चित गरिसकेका छौ तिमीहरु स्वयमले ।
देश परिवर्तनका लागि आवाज उठाउनु यदि अपराध हो भने, आम नेपालीहरुको अधिकार र मुक्तिका लागि लड्नु अपराध हो भने म यो अपराध हासीहासी गर्न तयार छु । फिल्डमा उत्रिसके म, अब मसंगै यो अपराधमा करोड नेपालीहरु सहभागी हुदैछन् तिमि तिम्रा जेलखानहरु थप निर्माण गर यहाँ अपराधीहरुको संख्या करोडौं पुग्ने निश्चित छ ।
२ छाक पेटभरी खान नपाएका भोकानांगाहरु, टेक्न ठाउँ नपाएका हजारौं सुकुम्बासीहरु, दाइजोको नाममा जिउदै जलाइएका र पुरुषवादी समाजको सिकार भएका महिला दिदीबहिनीहरु सबै तिम्रा दुश्मन हुन् ।
सुन्दर मानव जीवनको अपमान गरेर जातपातको आधारमा छुवाछुत गर्नेहरु तिनै दलित, जनजाति र गरिबहरु अब तिमीहरुका शासनमाथि धावा बोल्नेछन् । त्यसैले तिमीहरु तिम्रा कारागारहरु निर्माण गर्दै जाउ ।
बस यहि आवज तिम्रा लागि बारुद साबित हुनेछ भन्ने विश्वाससहित आजलाई कमल बन्द गर्दैछु तर फर्किनेछु छिट्टै, बम बोकेर…
(यो देशको एक सच्चा सिपाही, एकीकृत जनक्रान्तिको यात्राबाट)